မိုးရာသီမှာ ကမ်းခြေဘက်ကို ခရီးထွက်မယ်ဆိုရင် ဒါတွေ ပြင်ဆင်ထားပါ။ – For her myanmar
Posted on May 20, 2019 Author Christina Rosy	Comment(0)
တကယ်လို့များ မိုးတွင်းမှာ ကမ်းခြေဘက်ခရီးထွက်မယ်ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ထားရင်တော့ မိုးရွာတာကို စိတ်မကောက်တော့ဘဲ ဒီဆောင်းပါးကို အားကိုးလိုက်ပါတော့ ယောင်းရေ…
မိုးရာသီဆိုတာ အလွမ်းဓာတ်ခံရှိသူတွေအတွက် အလှတရားဆိုပေမဲ့ ခရီးသွားပိုး မသေနိုင်တဲ့သူတွေအဖို့တော့ အတားအဆီးတစ်ခုလိုပါပဲ။ ဆယ့်နှစ်လရာသီလုံး ခရီးဆာနေတဲ့ ယောင်းတစ်သိုက်အတွက်တော့ မိုးတွင်းဘက် ခရီးထွက်ဖို့အရေး၊ ခရီးစဉ်တစ်လျှောက် အဆင်ပြေဖို့အရေး အသည်းအသန်အကြံထုတ်ရပါပြီ။ ကဲ.. ဒါဆို မိုးတွင်းမှာ ကမ်းခြေကို ခရီးသွားဖို့ ဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားရမလဲ?
၁။ မလိုအပ်ဘဲ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။
ခရီးသွားမယ့်ရက်နီးလို့ပျော်နေတုန်းကအကောင်း၊ မုန်တိုင်းတိုက်မယ်၊ လှိုင်းကြီးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းကြားရော… အပျော်တွေမြောင်းထဲရောက်ကုန်ရော။ ဒီလိုအဖြစ်မျိုးမကြုံရအောင် တကယ်မှန်မမှန်စုံစမ်းပါ။ အက်ဒ်မင်တို့သွားတုန်းက အမြဲအဲ့ဒီ့လိုကြုံဖူးတယ်။ သွားမယ့်နေ့လည်းရောက်ရော အေးဆေးပဲ။ ဖြစ်မယ်၊ မဖြစ်ဘူး မသေချာသေးတဲ့ ပြဿနာအတွက် မပူပါနဲ့။ အဲ.. သတင်း မှန်၊ မမှန်ဆိုတာတော့ သေချာ စုံစမ်းနော်.. ခဏနေကျ ဟာ.. အက်ဒ်မင်က စိတ်မပူနဲ့ဆိုပြီး ဘာမှ မစုံစမ်းဘဲ သွားလိုက်လို့ တကယ့်တကယ် မုန်တိုင်းလာရင် ဒုက္ခ…
၂။ ရှော့ပင်း ကြိုထွက်ပါ။
မိုးတွင်းပိုင်းခရီးထွက်တယ်ဆိုတာ တခြားရာသီတွေလောက်မလွယ်ပါဘူး။ ခရီးထွက်ရက်နီးမှ မိုးကြီးလေကြီးဖြစ်နေရင် ဟိုဟာလည်း မဝယ်ရသေး၊ ဒါလည်း မရှိသေးနဲ့ ကမောက်ကမတွေ ဖြစ်လာဖို့ ရာနှုန်းများပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခရီးထွက်ဖို့ ကျိန်းသေပြီဆိုတာနဲ့ မထွက်ခင် ၂ပတ်လောက်အလိုကတည်းက ဖြည်းဖြည်းချင်းစီ ပစ္စည်းဝယ်စုပါ။ မဝယ်ရသေးလည်း ပြဿနာမရှိပါဘူး။ဟိုရောက်မှ တစ်ခုခုဝယ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုး လုံးဝ မတွေးမိပါစေနဲ့နော်.. အဲဒါတွေက ယောင်းပိုက်ဆံတွေအတွက် အန္တရာယ်ပါ။
Related Article >>> မြန်မာနိုင်ငံက လူသိနည်းနေသေးတဲ့ ကမ်းခြေ (၃)ခု
မိုးရာသီလိုအချိန်မျိုးမှာ ဟိုတယ်တွေ ဈေးသက်သာပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ဟိုတယ်ကောင်းကောင်း၊ ရေကူးကန်တွဲလျက်နဲ့ ငှားလိုက်မယ်ဆိုရင် ရာသီဥတုမကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတောင် ဟိုတယ်အခန်းထဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရေကူးကန်ထဲဖြစ်ဖြစ် နေရင်း ပင်လယ်ကြီးရဲ့ အလှအပတွေကို ဇိမ်နဲ့ ခံစားလို့ရပါပြီ။
၄။ ရေစိုခံပစ္စည်းတွေ ဆောင်ထားပါ။
ကိုယ်ကဓာတ်ပုံလှလှလေးတွေ ရိုက်ရတာ ကြိုက်ရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ မိုးရွာလည်း ဟိုတယ်ထဲအောင်းမနေနိုင်ဘူးဆိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ရေစိုခံဖုန်းနဲ့ နာရီတွေ ဆောင်ထားဖို့ လိုပါတယ် ယောင်းရေ… ဟာ.. ခရီးလေးသွားဖို့အတွက် ဖုန်းကို ရေစိုခံတာ ပြောင်းဝယ်နေရဦးမှာလားဆိုရင်လည်း မပူပါနဲ့ ယောင်းရေ.. သင်္ကြန်တုန်းက ဆောင်တဲ့ ရေစိုခံအိတ်လေးတွေ ရှိတယ် ဟုတ်? အာလေ့းတွေ ဆောင်သွားနော်.. မိတ်ကပ်ကတော့ အထွေအထူး ပြောနေစရာ မလိုဘူး ဟုတ်?
ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက် နားစွင့်ပြီး သတိပြုတာ မမှားပါဘူး။ အရေးကြီးတဲ့ သဘာဝအန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့လာတော့မယ်ဆိုရင် ဟိုတယ်ကဖြစ်ဖြစ် အကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်။ အခြေအနေမကောင်းလို့ အိမ်ပြန်ဖို့ လိုအပ်လာရင် ချက်ချင်း ပြန်ပါနော်.. အပျော်ကြောင့် မပျက်ပါစေနဲ့ ယောင်းတို့ရေ…
၆။ အင်္ကျီ အပိုသယ်ပါ။
တော်ရုံတန်ရုံ ကမ်းခြေသွားတဲ့အခါ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပါးပါးလွှာလွှာ အင်္ကျီမျိုးတွေ သယ်သွားတတ်ကြတယ်ဟုတ်? မိုးရာသီမှာဆိုရင်တော့ အင်္ကျီခပ်ထူထူ၊ စတော့ကင်ဘောင်းဘီမျိုးတွေပိုထည့်သွားတာ မမှားပါဘူး ယောင်းရေ…
ပင်လယ်ရေ အနက်ပိုင်းထဲ သွားဆော့တာမျိုး၊ ဟိုတယ်နဲ့ အလှမ်းဝေးတဲ့နေရာတွေဆီ ကျွမ်းကျင်သူမပါဘဲ သွားတာမျိုး လုံးဝ လုံးဝ မလုပ်ပါနဲ့ ယောင်းတို့ရေ… ရာသီဥတုအခြေအနေကို အမြဲမပြတ်ကြည့်ပြီးမှ ပျော်ပါနော်…
ကဲ..ဒီလောက်ဆို ကမ်းခြေဘက် ရွက်လွင့်တော့မယ်ယောင်းလေးတွေလည်း အကြံကောင်းတချို့ ရသွားလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်နော်… တခြား အကြံဉာဏ်ကောင်းလေးတွေရှိရင်လည်း ကွန်မန့်ထဲမှာ မျှဝပေးပါဦးလို့။
တကယျလို့မြား မိုးတှငျးမှာ ကမျးခွဘေကျခရီးထှကျမယျဆိုပွီး ဆုံးဖွတျထားရငျတော့ မိုးရှာတာကို စိတျမကောကျတော့ဘဲ ဒီဆောငျးပါးကို အားကိုးလိုကျပါတော့ ယောငျးရေ…
မိုးရာသီဆိုတာ အလှမျးဓာတျခံရှိသူတှအေတှကျ အလှတရားဆိုပမေဲ့ ခရီးသှားပိုး မသနေိုငျတဲ့သူတှအေဖို့တော့ အတားအဆီးတဈခုလိုပါပဲ။ ဆယျ့နှဈလရာသီလုံး ခရီးဆာနတေဲ့ ယောငျးတဈသိုကျအတှကျတော့ မိုးတှငျးဘကျ ခရီးထှကျဖို့အရေး၊ ခရီးစဉျတဈလြှောကျ အဆငျပွဖေို့အရေး အသညျးအသနျအကွံထုတျရပါပွီ။ ကဲ.. ဒါဆို မိုးတှငျးမှာ ကမျးခွကေို ခရီးသှားဖို့ ဘာတှေ ပွငျဆငျထားရမလဲ?
၁။ မလိုအပျဘဲ မစိုးရိမျပါနဲ့။
ခရီးသှားမယျ့ရကျနီးလို့ပြျောနတေုနျးကအကောငျး၊ မုနျတိုငျးတိုကျမယျ၊ လှိုငျးကွီးမယျဆိုတဲ့သတငျးတှလေညျးကွားရော… အပြျောတှမွေောငျးထဲရောကျကုနျရော။ ဒီလိုအဖွဈမြိုးမကွုံရအောငျ တကယျမှနျမမှနျစုံစမျးပါ။ အကျဒျမငျတို့သှားတုနျးက အမွဲအဲ့ဒီ့လိုကွုံဖူးတယျ။ သှားမယျ့နလေ့ညျးရောကျရော အေးဆေးပဲ။ ဖွဈမယျ၊ မဖွဈဘူး မသခြောသေးတဲ့ ပွဿနာအတှကျ မပူပါနဲ့။ အဲ.. သတငျး မှနျ၊ မမှနျဆိုတာတော့ သခြော စုံစမျးနျော.. ခဏနကြေ ဟာ.. အကျဒျမငျက စိတျမပူနဲ့ဆိုပွီး ဘာမှ မစုံစမျးဘဲ သှားလိုကျလို့ တကယျ့တကယျ မုနျတိုငျးလာရငျ ဒုက်ခ…
၂။ ရှော့ပငျး ကွိုထှကျပါ။
မိုးတှငျးပိုငျးခရီးထှကျတယျဆိုတာ တခွားရာသီတှလေောကျမလှယျပါဘူး။ ခရီးထှကျရကျနီးမှ မိုးကွီးလကွေီးဖွဈနရေငျ ဟိုဟာလညျး မဝယျရသေး၊ ဒါလညျး မရှိသေးနဲ့ ကမောကျကမတှေ ဖွဈလာဖို့ ရာနှုနျးမြားပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ခရီးထှကျဖို့ ကြိနျးသပွေီဆိုတာနဲ့ မထှကျခငျ ၂ပတျလောကျအလိုကတညျးက ဖွညျးဖွညျးခငျြးစီ ပစ်စညျးဝယျစုပါ။ မဝယျရသေးလညျး ပွဿနာမရှိပါဘူး။ဟိုရောကျမှ တဈခုခုဝယျမယျဆိုတဲ့အတှေးမြိုး လုံးဝ မတှေးမိပါစနေဲ့နျော.. အဲဒါတှကေ ယောငျးပိုကျဆံတှအေတှကျ အန်တရာယျပါ။
မိုးရာသီလိုအခြိနျမြိုးမှာ ဟိုတယျတှေ ဈေးသကျသာပါတယျ။ အဲ့ဒီလိုအခြိနျမြိုးမှာ ဟိုတယျကောငျးကောငျး၊ ရကေူးကနျတှဲလကျြနဲ့ ငှားလိုကျမယျဆိုရငျ ရာသီဥတုမကောငျးတဲ့အခွအေနမြေိုးမှာတောငျ ဟိုတယျအခနျးထဲဖွဈဖွဈ၊ ရကေူးကနျထဲဖွဈဖွဈ နရေငျး ပငျလယျကွီးရဲ့ အလှအပတှကေို ဇိမျနဲ့ ခံစားလို့ရပါပွီ။
၄။ ရစေိုခံပစ်စညျးတှေ ဆောငျထားပါ။
ကိုယျကဓာတျပုံလှလှလေးတှေ ရိုကျရတာ ကွိုကျရငျဖွဈဖွဈ၊ မိုးရှာလညျး ဟိုတယျထဲအောငျးမနနေိုငျဘူးဆိုရငျပဲဖွဈဖွဈ ရစေိုခံဖုနျးနဲ့ နာရီတှေ ဆောငျထားဖို့ လိုပါတယျ ယောငျးရေ… ဟာ.. ခရီးလေးသှားဖို့အတှကျ ဖုနျးကို ရစေိုခံတာ ပွောငျးဝယျနရေဦးမှာလားဆိုရငျလညျး မပူပါနဲ့ ယောငျးရေ.. သွင်ျကနျတုနျးက ဆောငျတဲ့ ရစေိုခံအိတျလေးတှေ ရှိတယျ ဟုတျ? အာလေ့းတှေ ဆောငျသှားနျော.. မိတျကပျကတော့ အထှအေထူး ပွောနစေရာ မလိုဘူး ဟုတျ?
ဘယျနရောပဲရောကျရောကျ နားစှငျ့ပွီး သတိပွုတာ မမှားပါဘူး။ အရေးကွီးတဲ့ သဘာဝအန်တရာယျတှကွေုံတှလေ့ာတော့မယျဆိုရငျ ဟိုတယျကဖွဈဖွဈ အကွောငျးကွားပါလိမျ့မယျ။ အခွအေနမေကောငျးလို့ အိမျပွနျဖို့ လိုအပျလာရငျ ခကျြခငျြး ပွနျပါနျော.. အပြျောကွောငျ့ မပကျြပါစနေဲ့ ယောငျးတို့ရေ…
၆။ အင်ျကြီ အပိုသယျပါ။
တျောရုံတနျရုံ ကမျးခွသှေားတဲ့အခါ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပါးပါးလှာလှာ အင်ျကြီမြိုးတှေ သယျသှားတတျကွတယျဟုတျ? မိုးရာသီမှာဆိုရငျတော့ အင်ျကြီခပျထူထူ၊ စတော့ကငျဘောငျးဘီမြိုးတှပေိုထညျ့သှားတာ မမှားပါဘူး ယောငျးရေ…
ပငျလယျရေ အနကျပိုငျးထဲ သှားဆော့တာမြိုး၊ ဟိုတယျနဲ့ အလှမျးဝေးတဲ့နရောတှဆေီ ကြှမျးကငျြသူမပါဘဲ သှားတာမြိုး လုံးဝ လုံးဝ မလုပျပါနဲ့ ယောငျးတို့ရေ… ရာသီဥတုအခွအေနကေို အမွဲမပွတျကွညျ့ပွီးမှ ပြျောပါနျော…
ကဲ..ဒီလောကျဆို ကမျးခွဘေကျ ရှကျလှငျ့တော့မယျယောငျးလေးတှလေညျး အကွံကောငျးတခြို့ ရသှားလိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျနျော… တခွား အကွံဉာဏျကောငျးလေးတှရှေိရငျလညျး ကှနျမနျ့ထဲမှာ မြှဝပေးပါဦးလို့။
Tagged beach, Knowledge, monsoon, Plan, Prepare, rainy, trip
Posted on January 17, 2018 Author Khine
Posted on August 11, 2017 August 11, 2017 Author Alex Aung
အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ညအချိန်မတော် ကားစီးဖို့ကြုံလာခဲ့လျှင်၊ တစ်ယောက်တည်း သွားဖို့ကြုံလာတဲ့ အခါမျိုးမှာ တက္ကစီးငှားဖို့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက်ကတော့ စိန်ခေါ်မှုအကြီးအကျယ် ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုရီးယားသမိုင်းထဲက ထင်ရှားတဲ့ မေတ္တာရှင် ဘုရင်မ ဆွန်ဒေါ့အကြောင်း တစ်စေ့တစောင်း
Posted on October 30, 2018 October 30, 2018 Author Aye Mon Kyaw
အမျိုးသမီးမို့ ရာဇပလ္လင်နဲ့ မထိုက်တန်ဘူးတဲ့လား?